Iifolishi zeNdlunkulu eNdiya
Njengoko ihlobo elidlulayo liza kubantwana kunye nabantu abadala banokuvuya ngokulindela kweeholide ezizayo. Ukuba izikolo kunye neekholeji zivalelwe ukushona, kungcono kunokuya kwiholide kunye nezivaliweyo zakho. Inqabile kakhulu umntu ukhetha ukuya kwindawo eshushu ephumayo. Ngaphandle kokuba iGoa! Izitulo ze-Hill kulo lonke ilizwe ziindawo ezifanelekileyo zokutyelela kule ntsipho.
Indawo efanelekileyo yokuhamba entlovini yinduli. Epholile kwaye ezolileyo, ukushisa kwehlobo akukuthinteli khona kwaye unokuyonwabela ubunjani bomama onobungangamsha bakhe bonke. Ngehambo elifutshane nelikhululekile, unokuceba ukutyelela eLonavala naseKhandala e Maharashtra. I-Serene kunye noxolo, ngokuqinisekileyo uya kufumana ukuphumula ofunayo! Ukuze uhambe kunye nosapho okanye othandekayo wakho, ukuya ngasenyakatho kuya kuba yinto ekhethekileyo. Ukuhlolisisa iziqithi ezinkulu kunye ezintle, ukuthenga, ukuhamba ngothando kunye neendlela ozenzayo apha. Ukuze uhambo olungakumbi kunye nabahlobo bakho okanye i-solo, lungcono kunokwenyuka kwendlela eya eLeh Ladakh. Ukuhamba ngebhayisikili yakho, ukutya kwiidrabha zendlela, ukuhlola nokuhamba kwindlela yonke. Yintoni enye into enokuyicelela ngayo kwiholide!
Uluhlu olungezantsi ziiphakheji ezimbalwa ezinikezelwa ngathi njengePhakheji yeTyelelo lwe-Srinagar, Iiphakheji ezihamba phambili zeKashmir, i-Leh Ladakh Tour Package, Uhambo oluya eLonavala - Khandala oluya kwenza ukuba izigqibo zakho zeholide zilula. Qinisekisa ukuba ukhetha okulungileyo! Uhambo oluvuyayo!
Uhambo oluya kwi-Himachal efihliweyo
Fumana i-Uttarakhand Tour Package
Himachal kunye neMyuziyam yoLondolozo lweCold
I-Package ye-Himalayan Glory Tour
Iholide eKalataka naseTamil Nadu